पहाड हरियो (Sheregesh): वर्णन, विशेष अवकाश
को Sayan को जंक्शनमा माउन्टेन, Altai र Kuznetsk Alatau, पहाड Shoria - को केमेरोभो क्षेत्रमा एक पहाड-taiga क्षेत्र छ। 600 मीटर 500-1 भित्र क्षेत्र को उचाइ। अन्य कम माथिल्लो तुलना धेरै पहाड प्रकाश पार्छ। उच्चतम Patyn (1630 मिटर), यो, पौराणिक कथा अनुसार, बस्ने "हिउँ मानिस" गुफाहरु, संग घायल छ; पहाड कम - कुरगान, Muztagh, Utuya र सबै भन्दा सुरम्य - Karitshal, जुन स्थानीय ग्रीन भनिन्छ।
हरियो पहाड को केन्द्र हो पर्वतीय Shoria। यसको खुट्टा मा Sheregesh गाउँ, साथै एउटै नाम को लोकप्रिय स्की रिसोर्ट छ।
पुरातन "karitshal" को स्थानीय क्षेत्रीय भाषा बाट अनुवादित अर्थ "को रिज किनारा", तर पनि हरियो पहाड आकस्मिक भनिन्छ। खैरो रक को आसन्न चुचुराहरूको गर्न विपरीत मा प्रशस्त मात्रामा shrubs र घास, यो अन्य संस्थाहरू को पृष्ठभूमिमा जोड दिंदै बढ्दै।
ग्रीन पहाड (Sheregesh) को उचाइ के हो? अत्यन्त क्षेत्र प्रभावित गर्न 270 1 मिटर माथि। यसलाई भित्र caverns को अधिकता को गठन प्रभावित, लामो weathering र क्षरण छ।
यो जलवायु एकदम नाटकीय कन्टिनेन्टल, तापमान परिवर्तन हो। जाडो, ठण्डा windless, एक स्थिर हिउँ कवर संग। पहिलो हिउँ सेप्टेम्बर मा यहाँ पर्छ। तर उहाँले मात्र नोभेम्बर ustaivayte। त्यसपछि स्की सिजन हरियो पहाड (Sheregesh) होस्टहरूको सुरु, र।
औसत जनवरी तापमान - -13 ° ... -15 ° सी मार्च, सेट निर्मल घाम दिन को अन्त भएकोले यो अवधि sunbathe गर्न पहिले नै सम्भव छ। मई को शुरुवात अघि तर हिउँ कवर, र छुट्टी अवधि विस्तार। हरियो पहाड (Sheregesh) - एक ठाउँ जहाँ छोटो र सामान्य तातो गर्मीयाम। मौसम औसत तापमान - + 19 ... + 22 ° सी वर्षा को रूप मा वर्षा को गर्मी मा एक लाभ घोप्टो पर्छ।
यस क्षेत्रको वनस्पति सजाना, पाइन र FIR प्रभुत्व शंकुधारी boreal वनको हुन्छन्। वन बीच क्षेत्रमा4मीटर सम्म जो घाँस उचाइ खाली उत्पन्न! 1000 मीटर को एक ऊंचाई मा अल्पाइन Meadows सुत्छन्।
हरियो पहाड (Sheregesh) थप र वैविध्यपूर्ण Fauna छ। जहाँ ठूलो जनावर लागि अनुकूल वासस्थानमा - reindeer, एल्क, मृग र खैरो भालु। इलाका मा चरा र पहाड प्रवाहको माछा को पूर्ण एक ठूलो संख्या छ। Tashtagol आरक्षित र - शीर्ष को खुट्टा मा त्यहाँ दुई राष्ट्रिय प्रकृति आरक्षित छन् शोर शर्ट्स राष्ट्रिय निकुञ्ज। तिनीहरूले फर-बोकेका जनावर (मिंक, ermine, सेबल) सुरक्षा गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। पहाड Shoria क्षेत्र अक्सर प्रकृति मा समानता लागि स्थानीय स्विट्जरल्याण्ड भनिन्छ।
हरियो पहाड (Sheregesh) पर्यटकहरु बीच एकदम लोकप्रिय छ। यसको खुट्टा मा खेल पाहुना थियो जो एक स्की जटिल छ। यो 1981. मा निर्मित थियो जटिल यी सबै वर्ष कार्य भएको थियो, तर केवल 2000s देखि। यो एक स्की सक्रिय अब विकास छ जो, आधुनिक सुविधा र ढलान संग रिसोर्टमा भयो।
क्षण मा, खुट्टा मा स्की जटिल नाम Sheregesh फलाउँछ। हरियो पहाड (लेख मा फोटो हेर्नुहोस्) आउटडोर उत्साही को एक ठूलो संख्या आकर्षित गर्छ। वर्ष को समयमा आफ्नो नम्बर 980 हजार। मान्छे पुगेको छ। मौसम को लामो अवधि (नोभेम्बर7महिना मार्च गर्न), 45 ° 15 ° को ढलान को steepness (दुवै शुरुआती र पेशेवरहरुको लागि), शान्त को अनुकूल जलवायु, स्थिर बाक्लो हिउँ आवरण: मान्छे यहाँ क्षेत्र को अद्वितीय सुविधाहरू लालच छन्। साथै, सुसज्जित ट्रयाक को एक उच्च स्तर स्किइङ को अन्तर्राष्ट्रिय संघ द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो।
हाल, परिसर हुन्छन्:
बाट 700 मिटर 3900 मिटर, 35 किमी को कुल लम्बाइ विभिन्न लम्बाइ piste;
17 विभिन्न निर्धारण लिफ्टहरु (रिकाव, ट्रक र chairlift);
त्यहाँ बन्द-piste स्की लिफ्टहरु र ढलान;
पनि टिप्पण लायक को निशान को चौडाई 50 200 मिटर र उचाइ 300 देखि 700 मिटर छ।
यस क्षेत्रको पूर्वाधार राम्रो-विकास गरे। वरिपरि स्की रिसोर्ट्स विभिन्न स्वरूप र स्तर मा 50 भन्दा बढी होटल र सराय अवस्थित छ। पर्वतमा को ढलान छन् होटल, एक सानो टाढा जंगल मा निजी कटेज र षाले विशेषताहरु।
दायरा 400 rubles देखि कोठा दर। निस्सन्देह, तल्लो मूल्य, सेवा बुरा र कोठा छ। लागत जस्तै होटल "Snowdrift" मा पाउन सकिन्छ। यहाँ बस्ने मान्छे को समीक्षा द्वारा न्याय हुन सक्छ। अवस्था एक नम्बर मा खर्च मुद्रा जायज छन्।
जीवित लागि पहाडी ग्रीन (Sheregesh) मा के होटल हेर्न सक्नुहुन्छ? राम्रो "Telbes", "साइबेरिया", "रूसी घर", "Olympus", "भालु।"
Sheregesh मा स्थायी रूपमा नोवोसिबिर्स्क "शीतकालीन गरेको कथा" बाट रेल पर्यवेक्षण र निकटतम विमानस्थल Spichenkovo (200 किमी दूर) छ।
Rasputin को घर-संग्रहालय, Pokrovskoye को गाउँमा
आरन एवेन्यू। सेन्ट - पीटर्सबर्ग
जब hops सङ्कलन? hops कसरी बढ्न
किन र Pushkin गर्ने मारे? को कवि को संक्षिप्त जीवनी
आधुनिक संस्करणमा क्रस-देश - dvuhpodvesy Stels फोकस
Plyacki: खाना पकाने को लागि नुस्खा
Katya Sambuca: जीवनी, उमेर, व्यावसायिक गतिविधि
भिटामिन र खनिज जटिल "Berokka": प्रयोगको लागि निर्देशन
रिटेलर लागि हार्डवेयर र फास्टनरों किन्न
को भुँडी को हर्निया सेतो लाइन र उपचार को तरिका
गाजर बारेमा रहस्य मीठो ध्वनि गर्नुपर्छ
अनाज को परिवार: फल को विशेषता सुविधाहरू, प्रतिनिधिहरु